गीत जस्तै होला ‘बटरफ्लाई’ हिट ? (भिडियो) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
गीत जस्तै होला ‘बटरफ्लाई’ हिट ? (भिडियो)
नेपाली चलचित्रको व्यापार उत्कृष्ट हुनुको पछाडि गीतसंगीतको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । गीतसंगीतले नै कैयौ चलचित्रले निर्माताको लगानी बचाइदिएका छन् । यस्तै, पुष २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘बटरफ्लाई’मा समावेश ‘म गाउँदिन अब गीत’ बोलको गीत पनि अहिले युट्युबमा राम्रै हिट भइरहेको छ ।
हुनत, युट्युबमा लाखौं वा करोडौं ‘भ्यूज’ गएका गीतसंगीत र ट्रेलरका कारण चलचित्र पनि हिट हुन्छ भन्ने छैन । तर, केहीको हकमा भने यो कुरा लागू भएको छ । ‘बटरफ्लाई’लाई पनि यो गीतले यतिबेला प्रचारमा राम्रै सघाएको छ । १ महिना अगाडि युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको यो गीतलाई अहिलेसम्ममा युट्युबमा ११ लाख बढी पटक हेरिएको छ ।
अब प्रश्न यो उठेको छ कि गीत हिट हुँदै गर्दा फिल्म पनि हिट होला त ? यो त पुष २८ पछि नै थाहा हुनेछ । गीतमा सुगम पोखरेल र अञ्जु पन्तको स्वर रहेको छ । शब्द र संगीत अर्जुन पोखरेलको छ । सुरेश बज्रचार्य चलचित्रका छायाँकार हुन् ।
पुष्पान्जली अधिकारी (सखा), रामशरण राना र भुपेन्द्र सुवेदी निर्माता रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रमेश प्रजापति हुन् । यो फिल्मका निर्देशक ओमप्रतिक गुरुङ हुन् । चलचित्रमा प्रियंका र आर्यनका अलावा अर्पण थापा, रविन्द्र खड्का, पुरन थापा, सुष्मा कार्की, सुरविर पण्डित लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहेको छ ।